Miyey Juventus Ku Saxsan Tahay In Ay Shaqada Ka Caydhiso Andrea Pirlo? - Laacib
HomeSerie AMiyey Juventus Ku Saxsan Tahay In Ay Shaqada Ka Caydhiso Andrea Pirlo?
Miyey Juventus Ku Saxsan Tahay In Ay Shaqada Ka Caydhiso Andrea Pirlo?
April 6, 2021 Abdiwahab Ahmed Serie A, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda kubadda cagta Juventus yaaa la sheegayaa in ay ka fiirsanayso in ay shaqada ka caydhiso tababaraheeda Andrea Pirlo, kaddib markii ay kooxdaasi natiijooyin liita ka keentay horyaalka Serie A, isla markaana ay wareegga 16ka kaga hadhay tartanka Champions League.
Juventus ayaa ku jirta kaalinta afraad ee horyaalka Serie A iyadoo 12 dhibcood ka dambaysa Inter Milan oo hoggaanka haysa, taas oo muujinaysa in ay adag tahay in ay difaacato horyaalka ay sagaalkii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey sida xidhiidhka ah ugu soo guuleysanaysay.
Natiijooyinkan niyad-jabka ah, waxay su’aal geliyeen mustaqbalka tababare Andrea Pirlo oo la sheegayo in shaqada laga caydhin doono haddii ay kooxdu isbeddel degdeg ah samayn weydo, gaar ahaan kulamada toddobaadyadan foodda inagu soo haya.
Si kastaba, halyeygii hore ee Talyaaniga ee Fabio Cannavaro ayaa aaminsan in Juventus ay qalad weyn ku samaynayso haddii ay shaqada ka caydhiso Andrea Pirlo.
Fabio Cannavaro ayaa yidhi: “Juventus waa in ay is dejiso.”
Difaacan hore ee ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or oo u warramayay wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa intaa ku daray: “Markii ay Juve soo xulatay Andrea, wuxuu si fiican u ogsoonaa in aanu lahayn wax khibrad ah. Waa macquul in uu u baahan yahay waqti uu ku qaan-gaadho, xataa xidhiidhka uu la leeyahay kooxda ayaa waqti u baahan. Wali waxa hadhsan 30 dhibcood oo loo tartamayo, waxaana daruuri ah in go’aanka dib loo dhigo.
“Waxyaabo fiican ayuu qabtay, qaladaadna wuu sameeyey: Waa binu-aadam. Waa dhaxal ay waajib tahay in la ilaaliyo. Intaas oo dhan kaddib, Juve may xaqiijin waxa ay ka yeelayso Pirlo iyo wixii ay ku doorteen xagaagii hore.”
Intaas kaddib ayuu iftiimiyey qaladka ay samaynayso Juventus, waxaanu yidhi: “Qalad labaad ayay ku noqon doontaa haddii ay waqtigan qaataan go’aankaas (caydhinta Pirlo). Canaantuna isaga oo kali ahi ma yeelanayo haddii ciyaartoydu ay garoonka iyo bannaankiisaba ka sameeyeen qaladaad.”